Maroantsetra : Olona 08 maty nihotsahan’ny rano vato -
AccueilRaharaham-pirenenaMaroantsetra : Olona 08 maty nihotsahan’ny rano vato
03/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Loza mahatsiravina indray no niseho tao amin’ny fokontany Ambodiaramy, kaominina ambanivohitr’Ambinanitelo, Distrikan’i Maroantsetra ny zoma hariva lasa teo. Olona miisa valo no indray namoy ny ainy vokatry ny fihotsahan’ny rano vato tany an-toerana tamin’io fotoana io, izay ankizy avokoa ny ankabetsahan’izy ireo. Ankoatra ireo maty dia olona enina hafa no naratra mafy vokatr’izany. Araka ny tati-baovao azo avy any an-toerana dia nirotsaka tsy nahitana fiatoana ny orana tany an-toerana tamin’io andron’ny zoma io, an-keviny nokaofin’ny riaka ny nofon-tany izay anisan’ny nihazona ireo vato, ka izao nitera-doza izao. Trano miisa roapolo no indray rava tamin’izany, ary olona taraiky tao avokoa ireo namoy ny ainy ireo. Nanao izay ho afany ny mpiray tanàna sy ireo fokonolona tamin’ny famonjena ireo olona ireo, saingy tamin’ny fotoana namoahana ny razana tao, dia efa tsy nahitana aina intsony.
Araka ny voalaza hatrany dia tsy vao sambany akory ity tranga iray ity no niseho tao amin’io fokontany io, fa efa nisy indray mandeha tamin’ny 18 Marsa lasa teo. Tototra avokoa ny tanàna , saingy ny nahasamihafa izany tamin’ity fanindroany ity dia afaka nanavotra ny ainy ireo olona vantany vao niseho ny loza, ka tsy nisy ny aina nafoy. Fotoam-pahavaratra tahaka izao no tena hisian’ny fihotsahan’ny rano, tany sy ny rano vato toa ity nitranga ity. Tsy vao ela akory izay no nisy mpianaka maty nihotsahan’ny tany teny Alasora, raha iny teo am-pandavahana lava-drano iny . Ilay tovolahy no sempotra nototofan’izany voalohany, ka niantso vonjy tamin-drainy. Nanolotra ny tanany hamonjy ny zanany ity farany saingy latsaka tao anatin’ilay lavaka ihany koa, ka niara-namoy ny ainy tao izy mianaka ireo. Mila mitandrina ny rehetra, ary alohan’ny hanorenana trano fonenana dia tokony hijery ny manodidina sao misy zavatra atahorana hampidi-doza. Efa nandray ny andraikiny ireo tompon’andraiktra isan-tsokajiny any an-toerana momba ity raharaha ity.
Tsy mbola nandray fanapahan-kevitra amin’ny maha Fitsarana Avo azy mihitsy ny HCC, izany hoe mpampihatra ny lalàna, hatramin’izay naha filohan’ity andrim-panjakana ity an’i Jean Eric Rakotoarisoa. Difotry ny kolikoly avo lenta tanteraka ny HCC ary ...Tohiny